मधुमेहमा खुट्टाको स्याहार – Health Post Nepal
मधुमेहमा खुट्टाको स्याहार
२०७५ भदौ ८ गते १३:२१
मधुमेह रोगबाट हुने खुट्टाको समस्या मधुमेहबाट हुने प्रमुख जटिलतामध्ये एक हो । दिन प्रतिदिन मधुमेहका रोगी बढ्दै जानु र आयु पनि बढ्नाले मधुमेहमा हुने खुट्टाको समस्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । मधुमेह भएका व्यक्तिमा खुट्टा गुमाउनुपर्ने जोखिम मधुमेह नभएका व्यक्तिमा भन्दा १० देखि २० गुणा बढी हुन्छ । संसारभरमा हरेक ३० सेकेन्डमा मधुमेहका कारण एकजनाले खुट्टा गुमाउनुपरिरहेको हुन्छ ।
मधुमेहसम्बन्धी खुट्टाको समस्या प्रायः बढी उमेरका, लामो समय मधुमेह भएका, उच्च रक्तचाप भएका, मधुमेहका कारणले आँखाको समस्या भएका, धूमपान गर्ने व्यक्तिमा बढी देखापर्ने गर्छ । मधुमेह भएका व्यक्तिको खुट्टामा घाउ, अल्सर भएमा मधुमेह भएको तर त्यस्तो समस्या नभएको व्यक्तिभन्दा ५ गुणा बढी स्वास्थ्योपचार खर्च लाग्न सक्छ ।
संसारभरिमा मधुमेहको कारणबाट खुट्टाको समस्या भएका मध्ये ७० प्रतिशत खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था भइसकेपछि अस्पताल आउँछन् । खुट्टा गुमाइसकेपछि मधुमेह भएका व्यक्तिहरू अत्यधिक आर्थिक, शारीरिक र मानसिक भार खप्दै परनिर्भर बन्न पुग्छन्
मुख्यतया मधुमेहको वेलैमा पहिचान, मधुमेह भएका व्यक्तिमा पनि विशेषगरी जोखिममा भएको खुट्टाको पहिचान,
मधुमेह भएका व्यक्तिले गर्ने खुट्टाको नियमित निरीक्षण एवं स्याहार, स्वास्थ्यकर्मीसँग मिलेर गर्ने नियमित जाँच तथा परीक्षण, खुट्टाको स्वास्थ्यबारे जनचेतनाले धेरै हदसम्म खुट्टामा आउन सक्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
संसारभरिमा मधुमेहको कारणबाट खुट्टाको समस्या भएका मध्ये ७० प्रतिशत खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था भइसकेपछि अस्पताल आउँछन् । खुट्टा गुमाइसकेपछि मधुमेह भएका व्यक्तिहरू अत्यधिक आर्थिक, शारीरिक र मानसिक भार खप्दै परनिर्भर बन्न पुग्छन् । आफैँ हिँडडुल गर्न नसक्ने भएपछि सामाजिक रूपले पनि एक्लै पर्न जान्छ ।
खुट्टा लाटोजस्तो भएको, छोएको चाल नपाउने खुट्टामा घाउ हुने तथा समयमै थाहा पाउन नसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । प्रायः खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्थाको सुरुवात एउटा सानो घाउ अल्सरबाट सुरु हुने गर्दछ ।
खुट्टाको स्याहारसँगै मधुमेह भएका व्यक्तिले आफ्नो रगतमा सुगर र रगतमा बोसोको मात्रा र रक्तचापलाई पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ । धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले ती कुराहरू त्याग्नुपर्छ । खुट्टामा एकप्रकारको छालाको समस्या आएका व्यक्तिमा पनि खुट्टाको घाउ हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले यसको पनि उपचार गर्नुपर्छ ।
खुट्टाको समस्या भएमा आफ्नो उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीसँग तुरुन्तै सल्लाह गर्नुपर्छ । कुनै कुरा नबुझेमा वा अन्योल भएमा सल्लाह लिनुपर्छ ।
मधुमेह रोगबाट हुने खुट्टाको समस्याका कारण
मधुमेह भएका व्यक्तिमा खुट्टाको स्नायु प्रणालीमा समस्या देखिएपछि पोलेको, घोचेको, घाउ, अल्सर भएको चाँडै थाहा नपाउन सकिन्छ । खुट्टा सुक्खा हुने, छालामा साना–साना छिया पर्ने समस्याहरू पनि आउँछन् । त्यस्तै, स्नायु समस्याको अर्काे प्रकारका कारण खुट्टाको आकार बिग्रन सक्छ र यस्तो आकार बिग्रेका खुट्टाहरूमा घाउ अल्सर बन्न सजिलो हुन्छ ।
मधुमेह भएका व्यक्तिमा रक्तनलीसम्बन्धी पनि समस्या आउन सक्छ । रक्तनलीको समस्याले गर्दा घाउहरू निको हुन झन् गाह्रो हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिमा हिँड्दा तल्लो खुट्टाको पछाडिको भाग दुख्नेजस्ता लक्षणहरू आउन सक्छन् ।
मधुमेह भएका व्यक्तिमा खुट्टाका घाउ हुने जोखिम र संक्रमण हुने सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ र त्यस्तोे संक्रमण निको हुन पनि गाह्रो हुन्छ र शरीरभरि नै फैलिएर गएर खतरामा पार्न सक्दछ । आँखाको समस्याले राम्ररी नदेख्ने भएका व्यक्तिले खुट्टामा घाउ भएको थाहा नपाउन पनि सक्छन् ।
जुत्ता किन्दा साँझपखतिर किनेको मात्रै राम्रो हुन्छ, किनभने त्यतिवेला खुट्टा फुलेको हुन्छ । नयाँ जुता लगाउँदा बिस्तारै लगाउँदै बानी बसाल्दै जानुपर्छ, घाउ हुन दिनुहुँदैन । कहिलेकाहीँ अवस्था हेरेर मधुमेह रोगीले विशेषप्रकारका जुतासमेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
मधुमेह भएका व्यक्तिले खुट्टालाई तातोपानी, तातो ब्याग, हिटर, आदिबाट टाढा राख्नुपर्दछ । चिसो लागेको खण्डमा मोजा लगाएर न्यानो बनाउनुपर्दछ । धेरै तातो भुइँबाट पनि जोगिनुपर्दछ । खुट्टामा फोका उठेको, रातो भएको, सुन्नेको छ÷छैन, रङ परिवर्तन भएको छ÷छैन, घाउ छ÷छैन, तापक्रम परिवर्तन भएको छ÷छैन भनेर दैनिक रूपमै चेकजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । खुट्टाको सजिलै नदेखिने भागहरूमा ऐनाको सहयोगले हेर्नुपर्छ ।
शारीरिक अवस्थाअनुसारको नियमित व्यायाम र वेलावेलामा खुट्टाका औँलाहरू चलाइराख्नाले रक्तसञ्चालनमा सहयोग पुग्छ । खुट्टालाई पानीले पखालेपछि सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ । अनि खुट्टाको तल्लो र माथिल्लो भागमा हल्का मलम लगाउनुपर्छ, तर औँलाको बीचमा लगाउनुहुँदैन । भिजेको खुट्टामा संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । बढी भएको मलम पुछ्नुपर्छ ।
मधुमेह भएका व्यक्तिले खाली खुट्टा हिँड्नुहुँदैन । घरभित्र बस्दा पनि आफूले घरभित्र लगाउने मिल्ने जुत्ता लगाएर हिँड्नुपर्छ । जुत्ता छान्दा सुरक्षित र आरामदायी छान्नुपर्ने हुन्छ । शारीरिक व्यायामअनुसारको सुहाउँदो जुत्ता लगाउनुपर्छ । धेरै उचाइ भएको, खुट्टाका औँलाहरू कसिनेखालको जुत्ता लगाउनुहुँदैन । जुत्ता लगाउँदा जुत्ताभित्र केही छ÷छैन भनेर हेरेर मात्र लगाउनुपर्छ । जुत्ता किन्दा साँझपखतिर किनेको मात्रै राम्रो हुन्छ, किनभने त्यतिवेला खुट्टा फुलेको हुन्छ । नयाँ जुता लगाउँदा बिस्तारै लगाउँदै बानी बसाल्दै जानुपर्छ, घाउ हुन दिनुहुँदैन । कहिलेकाहीँ अवस्था हेरेर मधुमेह रोगीले विशेषप्रकारका जुतासमेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
नङ मिलाएर काट्नुपर्छ । काटेको नमिलेमा पनि नङले घोचेर घाउ हुन सक्छ जसको उपचार गर्न गाह्रो हुन सक्छ । नङले दुखेको वा नङको रङ, आकार परिवर्तन भए–नभएको पनि जाँच गर्नुपर्छ । खुट्टाको समस्या आउनेबित्तिकै उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीसँगको परामर्शमा उपचार गरेमा समस्या समाधान भएर खुट्टा जोगाउन सहयोग पुग्छ ।
डा.वज्राचार्यके टिममा डा. बुद्ध कार्की, डा. अर्लक रजौरिया, डा. दीपक मल्ल डा. प्रजय श्रेष्ठ, डा. चन्द्रमा श्रेष्ठ